Goynta Laser iyo Calaamadeynta Gawaarida Gawaarida Gudaha - Goldenlaser
Goynta Laser iyo Calaamadeynta Gawaarida Gawaarida Gudaha
Warshadaha baabuurta waxay isticmaalaan qalab kala duwan, oo ay ka mid yihiin dharka, maqaarka, iskudhafka iyo balaastikada, iwm Waxyaabahan waxaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan, laga bilaabo kuraasta baabuurta, gogosha baabuurta, gogosha dusha sare ee qolalka qorraxda iyo barkadaha hawada.
Processing laser laser CO2 ( goynta laser , laser sixitaanka iyo laser perforation ka mid ah) hadda waa wax caadi ah gudahood warshadaha, u fureysaa fursado badan oo loogu talagalay codsiyada gudaha iyo dibadda ee wax soo saarka baabuurta, iyo waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo ka badan hababka farsamo dhaqameed. Qiyaasta iyo goynta laser-ka aan la xiriirin waxay leedahay heer sare oo otomaatig ah iyo dabacsanaan aan la qiyaasi karin.
Tiknoolajiyada goynta laser-ka ayaa si sii kordheysa loogu adeegsadaa warshadaha gawaarida si sax ah oo sareeya, xawaare sare, dabacsanaan sare iyo saameyn wax ku ool ah. Waxyaabaha soo socdaa waa alaabada gawaarida ama qalabyada loogu talagalay gudaha iyo dibedda baabuurta la og yahay in lagu farsameeyo leysarka suuqa.
Hawada Filter Edge
Daawashada Foils Sleeves
Saqafyada La Beddeli Karo
Qalabka Kale ee Gawaarida
Qalabka Lagu Haboon
Qalabka caadiga ah ee ku habboon goynta laser-ka CO2 ama calaamadeynta warshadaha baabuurta
Dharka, maqaarka, polyesterka, polypropylene, polyurethane, polycarbonate, polyamide, fiberglass, kaarboonka isku dhafan ee la xoojiyay, bireed, caag, iwm
Maxay yihiin faa'iidooyinka ku-shaqeynta leysarka ee warshadaha baabuurta?
Goynta laser-ka ee dharka udugga ama mesh 3D aan dhalanrog lahayn
Calaamadeynta laser-ka gawaarida gudaha gudaha oo leh xawaare sare
Laser ayaa dhalaalaya oo xiraya cidhifka maaddada, wax fiiqan ma leh
Nadiifi oo geesaha la jaray kaamil ah - looma baahna dib-u-shaqeyn kadib
Goynta laser iyo calaamadeynta laser hal qalliin
Heer aad u sareeya oo sax ah, xitaa jarista faahfaahin yar iyo mid adag
Ma jiro qalab xirxiran - Laser si joogto ah ayuu u soo saaraa natiijooyin wanaagsan
Farsamaynta rogrogmi kara - Laser goynta cabbir kasta iyo joomatari ahaan sida loogu talagalay
Nidaamka laser-ka ayaa ah mid aan lala xiriiri karin, wax cadaadis ahna lagu saarin maaddada
Dib-u-soo-celin degdeg ah - iyada oo aan loo baahnayn qalab dhisme ama beddelid
Talo soo jeedinta Qalabka
Waxaan kugula talineynaa nidaamyada soo socda ee laser-ka ee lagu shaqeynayo warshadaha baabuurta:
Noocyo waaweyn oo duub ah iyo qalab jilicsan oo si otomaatig ah oo isdaba joog ah u goynaya xawaaraha goynta ugu sareeya iyo dardargelinta.
Galvo & Gantry Laser xardho Mashiinka Mashiinka
Galvanometer iyo isku dhafka XY. Xawaare sare Galvo laser laser & daloolin iyo Gantry goynta laser-qaab weyn.
Calaamadeynta laser dhakhso iyo sax ah qalabka kala duwan. Madaxa GALVO waa la hagaajin karaa iyadoo loo eegayo cabbirka qalabka aad ka shaqeyso.
Miyaa loo isticmaali karaa nidaam laser ah si loo hagaajiyo habka wax soo saarkaaga? Waxaan kaa caawin karnaa inaad ku ogaatid tijaabinta shaybaarka alaabtaada ama sheygaaga. Nidaamyo kala duwan oo ay ka mid yihiin goyn, calaamadeyn, xardho, daloolin iyo goynta dhunkashada ayaa la samayn karaa. Waxaan bixinaa waqtiyo soo-noqosho muunad deg deg ah, warbixinno codsi oo faahfaahsan, iyo talo-bixin bilaash ah oo ka socota injineeradayada khibrada u leh barnaamijyada. Wax kastoo nidaamkaaga ah, waxaan kaa caawin karnaa inaad go'aamiso xalka ugu fiican ee laser-ka ee arjigaaga.